Nifampitifitra tanaty ny fonjabe mafy fiarovana indoneziana iray ny gadra mitam-piadiana sy ny mpiandry fonja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Mey 2018 4:59 GMT
FANAMPIM-BAOVAO (10 Mey 2018): Rehefa nifampitana nandritra ny 36 ora, Nitatitra ny manampahefana indoneziana ny marainan'ny alakamisy 10 mey, ora ao an-toerana, fa efa voafehy ny toe-draharaha. Nitolo-batana tsy misy fepetra ireo gadra noho ny fampihorohoroana miisa 145 ary nesorina tao. Nafindra tao Nusa Kambangan, fonja manana ny fiarovana faratampony ao afovoan'i Java manana ny anaram-bositra “Alcatraz Indoneziana”, izay hiatrehany ny fiampangana vaovao indray, ry zareo ireo. Natokana hoan'ireo voafonja noho ny fampihorohoroana ny Pasir Putih, izay ao anatin'ny fonja marosampan'ny Nusa Kambangan. Iray amin'ireo voafonja malaza ao i Abu Bakar Ba'asyir, mpitarika ara-panahin'ny Jemaah Islamiyah, vondrona iray nisintaka avy amin'ny Al Qa'eda aziatika atsimo-atsinanana. Taona vitsivitsy lasa izay, nivezivezy an-tserasera ny sarin'ilay mpitari-pivavahana ekstremista fitopolo taona mahery sy ireo voafonjan'ny Pasir Putih am-olony nanome fankatoavana an'ny ISIS. [ Nanampy vaovao: Andriamifidisoa Zo]
Misy rotaka nahatafiditra ireo voaheloka ho mpampihorohoro miisa efapolo mitranga amin'izao fotoana izao ao amin'ny fonja ao Depok, tanàndehibe iray Javan Andrefana akaikin'ny renivohitra Indoneziana, Jakarta.
Nanomboka tamin'ny Talata hariva ora any an-toerana ny rotaka tao amin'ny Foiben'ny Kômandin'ny Brigady Mifindrafindra (Mako Brimob), fonjabe mafy fiarovana iray izay ahitana ireo voafonja voaheloka ho manao fampihorohoroana.
Araka ny tatitra ofisialy, nisy ny fifandonana niseho noho ny vokatry ny tsy fifankazahoan-dresaka momba ny sakafo teo amin'ny gadra iray sy ny mpikambana iray tao amin'ny Densus 88, ekipa mpiady amin'ny fampihorohorona ao Indonezia. Vetivety dia niha-ratsy ny toe-draharaha rehefa nanentana ny hafa hihetsika ilay voafonja, nanao takalon'aina ireo mpiambina, ary nahavita niditra tao amin'ny fitahirizana ny fitaovam-piadian'ny fonja ry zareo.
Voalaza fa maty ny manampahefan'ny Densus 88 miisa dimy, raha navotsotra kosa ny iray rehefa natao takalon'aina nandritra ny 24 ora mahery.
Mbola tsy fantatra ny antony manosika ireo voafonja hanao izany
Tamin'ny alàlan'ny sehatra fampielezan-keviny, nilaza ho nandray anjara tamin'ity toe-javatra ity ny vondrona ISIS. Nandà ny filazan'ny vondrona ny polisy Indoneziana.
Mpikambana ao amin'ny JAD, vondrona iray tondroin'ny governemanta Amerikana ho mpampihorohoro, ny ankamaroan'ireo voafonja .
Notsongaina i Sydney Jones, manampahaizana momba ny fampihorohoroana avy ao amin'ny Ivotoerana momba ny Fandalinana ny politikan'ny Fifandirana (IPAC) fa ny voafonja pro-ISIS no nitarika hatrany ny korontana tao amin'ity fonjabe mafy fiarovana ity.
Tsy nomanina ny fikomiana araka an'i Al Chaidar, mpandalina Indoneziana momba ny fampihorohoroana, kanefa noho ny valifaty atao amin'ireo manampahefana no mety ho antony nahatonga izany, izay nanao bemidina tao amin'ny efitranon'ny fonja mba haka ireo finday tsy ara-dalana sy ny kopian'ny Korany.
Tenirohy ho firaisan-kina tao amin'ny Twitter
Tao amin'ny Twitter, nampiasa ny tenirohy #KamiBersamaPolri (Manohana ny polisim-pirenena izahay) ny Indoneziana mba handefasana ny fiaraha-miory any amin'ny havan'ireo mpiambina maty ary handrisika ny firenena mba hijoro hanohitra mafy ny fampihorohoroana.
Mpanjohy sioka, bevohoka sivy volana ny vadin'i Lietnà Yudi, izay maty teo amperinasa. Andao hivavaka ho an'ny fianakaviany isika.
Fiaraha-miory amin'ireo polisy maritiora miisa dimy. Misaotra anareo nanolotra ny ainareo ho an'ity firenena ity.
Manohana ny polisy izahay amin'ny ady atao amin'ny fampihorohoroana. Tsy tokony ho resy ny fanjakana. Heloka atao amin'ny olombelona ny fampihorohoroana .
Voafetra ny fidiran'ny fampitam-baovao tao an-toerana satria mbola mitohy ny fifampiraharahana sy ny hetsika tetikady .